Umbutho wezoKhenketho kwiCaribbean amalungu angengokarhulumente anyula ibhodi entsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » Umbutho wezoKhenketho kwiCaribbean amalungu angengokarhulumente anyula ibhodi entsha
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iqela elalisakuba ngamagosa olawulo lwendawo ekuyiwa kuyo eCaribbean lonyulwe ukuba libe kwi Umbutho wezoKhenketho kwiCaribbean (CTO) Amalungu ebhodi yabalawuli bamalungu ngamacandelo abucala ombutho. Kukhetho lwayo lwakutsha nje lokukhetha iqela labahlanu abamele iimfuno zabo kwibhodi yabalawuli ye-CTO nakwikomiti yesigqeba, amalungu amanyeneyo akhethe iqela elahlukileyo, elichotshelwe nguWilliam “Billy” Griffith, owayesakuba yi-CEO yeBarbados Tourism Marketing Inc, ngoku umlawuli olawulayo weWCG Consulting Ltd.
“Ndiwongekile ukuba ndonyulwe ukuba ndimele amalungu amanyeneyo eCTO kwaye ndimele eli qela leenkampani, njengosihlalo walo, kweli nqanaba libaluleke kangaka kwindawo yethu yezokhenketho,” utshilo uGriffith. "Eyona nto iphambili ekufuneka ndiyenzile kukuphinda ndinike amandla kwaye ndonyuse isiseko sobulungu, ukwakha amandla kunye nokusebenza nesebe elilawulayo kwisicwangciso esihlangeneyo sokubuyisa iziphumo ezibi ze-COVID-19."
UGriffith lelinye lamalungu amathathu amatsha amanyeneyo anyulwe kwibhodi yamalungu amahlanu. Abanye ababini nguSeleni Matus, owayesakuba ngumlawuli wezokhenketho eBelize, ngoku ongumlawuli olawulayo weZiko leZizwe ngezizwe lezoFundo ngezoKhenketho kwiYunivesithi yaseGeorge Washington, kunye noSharon Flax-Brutus, owayesakuba ngumlawuli wezokhenketho kwiiBritish Virgin Islands, ngoku ongumlawuli kunye weqhinga kwiNdawo ekuMiwa kuyo i-White Oleander.
“Imibutho eyomeleleyo yokhenketho yengingqi ibalulekile ngoku kunakuqala. Kuyandivuyisa ukusebenza neqela elikhulu leenkokheli zengingqi ukunceda uMbutho wezoKhenketho kwiCaribbean kunye namazwe angamalungu ayo ukwenza izixhobo ezitsha kunye nentsebenziswano eya kuthi inyuse ukomelela kunye nozinzo kushishino lokhenketho, ”utshilo uMatus.
"Njengomlawuli webhodi emanyeneyo ndingathanda ukuba sincedise umbutho ukuze ubuyise ukuzithemba kwamashishini abucala ukuze ubulungu bethu bungakhuli nje kuphela kodwa bube nokumela amacandelo ohlukeneyo eshishini lokhenketho," wongeze watsho uFlak-Brutus . "Ndinqwenela ukubona amathuba andisiweyo amalungu athabatha inxaxheba, kunye nokuququzelela ingxoxo malunga nokuba singasebenzisana njani ukuze kuzuze ukhenketho lweCaribbean."
Amalungu ebhodi amatsha aya kuxhaswa ngamalungu abuyayo, uJacqueline Johnson, i-CEO yeGlobal Bridal Group kunye neMarryCaribbean.com, kunye noBarry Brown, umlawuli olawulayo we-Afar Media kwiCaribbean. Bobabini basebenze kwibhodi emanyeneyo iminyaka emininzi kwaye bobabini bahlaziye ukuzibophelela kwabo ekuxhaseni iinjongo ze-CTO.
“Ndonwabile ukuba yinxalenye yebhodi emanyeneyo yeCTO. Ingakumbi kula maxesha angazange abonwe ngaphambili, imanyano zinethuba lokwakha umdla kunye nenkxaso kulo mbutho ubalaseleyo njengoko udala umbono omtsha ngekamva, utshilo uBrown.
“Ndonwabile kakhulu luluhlu lweetalente ezikhoyo ukunceda ekwakheni umbutho ngexesha nasemva kwengxaki ze-COVID-19. Iphulo labasebenzi bezokhenketho abanezakhono kwingingqi lithetha kakhulu ngokubaluleka kokhenketho kunye nesidingo 'sokwakha ngcono kunye,' utshilo uJohnson. "Kuyandivuyisa ukubandakanywa kolu luhlu lubalulekileyo lweengcali."
Ngemisebenzi eyahlukeneyo kunye neziganeko, amalungu amanyeneyo asebenzisa uluhlu lwawo olubanzi lweengcali kunye nobungcali ukunceda i-CTO ngenkqubo yayo yophuhliso lokhenketho lweCaribbean. Ngokubonisana nobulungu obumanyeneyo ngokubanzi, ibhodi yenza izindululo kwiinkqubo zokhenketho zengingqi kwibhodi yabalawuli ye-CTO, ichonga amathuba okwakha ubulungu be-CTO inkqubo yobulungu, kwaye iququzelele imisebenzi ephambili ngexesha
Unyulo lwebhodi emanyeneyo lubanjwa rhoqo emva kweminyaka emibini kumacandelo abucala nakumalungu angekho phantsi korhulumente weCTO. Unyulo lwalo nyaka lwabanjwa phantse okokuqala.